I-China enokuphinda isebenze iNgxowa yeLunch Box Box Canvas Ilaphu ngeAluminiyam ngeFoyile, Lunch Tote Handbag for Women, Men, School, Office Manufacture and Factory | Umzingeli omtsha
IZINTO: Ukufakelwa kwe-EPE foam engqindilili ngaphakathi + kufoyile yealuminium kunokugcina ukutya kwakho kuhlala kushushu / kuyabanda / kukutsha kangangeeyure, kungangeni manzi, kulula ukucoca i-BPA simahla. Siphucula i-Velcro ephezulu ye-Velcro ukuyenza isebenze ngcono.
UKHUSELEKILE NOKUNOKWENZEKA: Le ngxowa yesidlo sasemini ikhuselekile ekutyeni, i-100% ayinetyhefu, ubungqina obumanzi, ukumelana okunganyangekiyo kunye nokulwa nokubola, okubonelela ngokusetyenziswa okuhlala ixesha elide, ngaphandle, yenzelwe ipokotho yangaphakathi yokubeka izitshixo, umnxeba, amakhadi okanye isipaji sakho.
AMANQAKU AMANINZI: Ubukhulu: 8.3Lx6.5Wx10.5H intshi, ngesiphatho esitsha esiphuculweyo.Le tote yasemini ilungile ekupakisheni isixa esikhulu sokutya, nokuba inokuba nokutya kwemini yonke okudingayo, okulungele umsebenzi, ukusetyenziswa kwangaphandle kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
UKUQHUBA NGOKUQHELEKILEYO: Le ngxowa ye-canvas tote esebenza kwakhona inika isisombululo esinomtsalane nesingasindi kwiimfuno ezininzi zokugcina. Yindlela esefashonini yokuphatha ukutya, ukutya okulula, iziselo, iziselo zabafazi, amadoda nabantwana, okanye uyisebenzise nje ngengxowa yokubamba.
Umbala we-aluminium wokugquma ekulula ukuwucoca kunye ne-BPA yasimahla.
Ifom ye-EPE yokuthintela ukogcina ukutya kugcina ukutya kupholile kwaye kutsha.
-Roomy ngokwaneleyo ukubamba ibhotile yamanzi, isikhongozeli esinye okanye ezibini kunye neziqwengana ezimbalwa zeziqhamo.
-Ixhotywe ngengxowa yokugcina yangaphakathi yokubeka amakhadi akho, ifowuni, isipaji kunye nezitshixo.
Umsebenzi weTote Bag
-Indlela yefashoni yokuphatha ukutya, amashwamshwam, iziselo, iziselo, ikwanaso nesipho kubantu abadala, abasetyhini, amadoda, amantombazana akwishumi elivisayo kunye namakhwenkwe!
-Yenza amalungiselelo akho okutya abe lula kwaye ukhanyise ubomi bakho bemihla ngemihla obunempilo ukusukela ngoku.
-Ibonelelwe kwipateni enesitayile, ibhegi yasemini ye-HOMESPON yenzelwe ukuba ibe YI-Tote VERSATILE.
Izinto eziphathekayo: Umqhaphu kunye neAluminiyam yokugquma ukuthungwa
-Size: 8.3Lx6.5Wx10.5H intshi
-Iziphathamandla ezibini ezomeleleyo ezibanzi zivumela ukuba ibhegi inxitywe engalweni okanye esandleni, uya kuhlala ukwazi ukupakisha kwaye uphathe isidlo sasemini esifanelekileyo nokuba uyaphi.
Egqithileyo Ibhegi yeTennis eNkulu yeTennis yeTyhini yaBafazi kunye naMadoda yokuBamba iRacket yeTennis, iPickleball Paddles, iBadminton Racquet, iScash Racquet, iiBhola kunye nezinye izinto
Okulandelayo: Ubhaka omkhulu weBhegi yangaphandle yezemidlalo i-3P yeeNgxowa zeMikhosi yamaKhosi yokuHamba ngeKampu yokuKhwela okungangenwa ngamanzi yokuNxiba iNylon
Abantwana igqunyiwe Lunch Bag for Boys and Girls, Lu ...
Lunch Box zigqunyiwe Lunch Bag - ...
Lunch igqunyiwe Box Bag Leakproof Meal Prep Coo ...
Iibhegi zasemini ezinokuphinda zisebenze ezinokuthinteka ...
Elikhulu Lunch Bag igqunyiwe Lunch Box Soft kupholile ...
INkulumbuso yeLunch Box, igqunyiwe Lunch Bag yaMadoda ...